Fanamafisana harato Panel - China Hebei Samsung Metal Wire harato
Fanamafisana harato no ampiasaina ny fanamafisana ny simenitra, dia vokarina mba SANS 1024: 2006 sy ny fenitra iraisam-pirenena hafa fepetra arahana. Endri-javatra: • Hamafiso harato mats no tena fampiasa matetika amin'ny teny fanamafisana efa voarafitra mialoha ary indrindra mety ho an'ny fisaka slab fanorenana sy mivaingana ambonin'ny fandriana. Hafa natao fampiharana ny: • fihazonana sy Seara rindrina; • rairainy sy ny andry; • Concrete hanjaka takela; • Precast mivaingana singa; • Buildings tetikasa; • SW ...
Fanamafisana harato no ampiasaina ny fanamafisana ny simenitra, dia vokarina mba SANS 1024: 2006 sy ny fenitra iraisam-pirenena hafa fepetra arahana.
• Hamafiso harato mats no tena fampiasa matetika amin'ny teny fanamafisana efa voarafitra mialoha ary indrindra mety ho an'ny fisaka slab fanorenana sy mivaingana ambonin'ny fandriana. Hafa natao fampiharana ny:
• fihazonana sy Seara rindrina;
• rairainy sy ny andry;
• Concrete hanjaka takela;
• Precast mivaingana singa;
• Buildings tetikasa;
• dobo filomanosana sy ny gunite fanorenana.
• Hamafiso harato mats azo antsipirihany toy ny na fisaka na voahenjana fanitso, arakaraka ny asa takiana.
• Hamafiso harato fanamafisana be mampihena ny fanorenana ny fotoana.
• SANS 1024: 2006 voatondro lamba mats ireo fitsipika welded fanamafisana mats ary azo voalahatra fotsiny ny momba ny karazana lamba, taratasy sy hiondrika lafiny endrika kaody (Ny boky dia ny anarana faobe ny lamba ao kilao / m2 × 100).
• Ny mangatsiaka-tariby nanakodia sampona ampiasaina amin'ny harato welded lamba manana toetra hery (0.2% porofo adin-tsaina), fara fahakeliny, raha oharina amin'ny 450MPa 485MPa ho ambony tensile rebar. Lamba dia azo ampiasaina amin'ny adin-tsaina noho ny avo ambony tensile rebar ara-nofo vokatry ny famonjena ny hatramin'ny 8%.
ny Hamafiso harato no vokarina eo ambany fanaraha-maso henjana tsara amin'ny fitsipika rehetra manaraka SANS 1024: 2006 fitsipika sy ny fepetra arahana tolerances
Previous: Electro nandrisika welded harato Panel
Manaraka: Construction harato Panel
Simenitra manamafy harato
Fanamafisana Concrete harato
Hamafiso Rebar harato
Hot natsobony nandrisika Wire
Staninless Steel Razor tariby Wire